रमितेहरूको समाज :: सुजिता कार्की :: Setopati
तीज सुरू हुने मौसम थियो। गाउँका केही दिदीबहिनी ममीलाई तीजमा कता पूजा लाउने? पञ्चमीमा कता नुहाउन जाने? किनमेल गर्न कहिले निस्कने? भनेर छलफल गर्न जम्मा भएका थिए। त्यहि बेला एउटा कालो बिरालो आँगनमा देखियो। एक जना अन्टीले मलाई अम्बा दिने हजुरआमा बोक्सी भएको त्यो बिरालो उनैको रुप भएको सुनाउनुभयो। अरू कुरा त मैले त्यत्ति बेला बुझिनँ तर मेरो १० वर्षे उमेरको दिमागले ती अम्बा दिने हजुरआमा कसरी बिरालो बनिन् एकछिनमै? भन्ने कुराले भने छोयो। अचम्ममा परेँ। बोक्सी भनेको के हो थाहा नभए पनि ती हजुरआमा म्याजिक गर्न सक्ने क्षमताकी रैछन् भनेर मनले मान्यो। सानोमा बुवाले म्याजिक देखाउँछ’ भन्दै माँझी औलालाई यताउता सारेको जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। कसरी औठी लाको औंला कहिले यता र कहिले उता गर्छ भनेर अचम्म मान्थिम्, बुवा त साच्चिकै ठूलो मान्छे जस्तो लाग्यो। ती हजुरआमा पनि ठूलै लाग्न थाल्यो। त्यहि दिन साँझ खाना खाने बेला ममीलाई सोधेँ, ‘ममी त्यो हजुरआमा कसरी बिरालो बन्नु भयो? म नि त्यस्तै म्याजिक सिक्न पर्‍यो के, चाहेको बेला चरा बन्यो भुर्ररर उडेर जहाँ मन लाग्यो त्यहि गयो, चाहेको बेला बिरालो बन्यो अनि मामा घरमा राखेको दुध पेटभरी खायो....।’ ममी म सँग अलि धेरै रिसाउनुभयो, ‘के भन्छे यो? मान्छे पनि बिरालो बन्छ र? नचाहिने कुरा....।’
‘दिउँसो त्यो अन्टिले किन त्यस्तो कुरा गरेको त?’ ममी अलि नम्र भएर भन्नुभयो, “हेर छोरी, ती अन्टिलाई खासै ज्ञान छैन्, जस्ले जे भन्यो त्यहि पत्याउँछिन्। त्यस्ता कुरा कसैले गर्दा नसुन्नु, नपत्याउनु, मान्छे मान्छे नै हो.....।”
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३, २०७४, ०१:००:१४